प्रचण्डले माधवसँग मागेर स्यानिटाइजर दले, सहभागीले कोसँग माग्ने ?
हाम्रोखबर मङ्गलबार, पौष १४ २०७७
त्यसपछि यताउति हेर्दैै माधवसँग स्यानिटाइजर मागे । अलिकति निकालेर र बोतल फिर्ता दिएर आफ्नो हातमा दल्न थाले । माधवले उसै गरी स्यानिटाइजर भित्रि खल्तीमा राखे । हेर्दा लाग्छ प्रचण्डले स्यानिटाइजर बोकेका छैनन् वा आज बोक्न बिर्सिए ।
काठमाडौं । मंगलबार काठमाडौंमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका दाहाल नेपाल समूहले बृहत् जनप्रदर्शन गर्यो । ५० हजार कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने भनेको दाहाल नेपाल समूहले त्यसको एक चौथाई भने उतारेको देखियो ।
पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि देशकै राजनितिक माहोल तातेको छ । नेकपाकोे दुई तिहाईको सरकार बनेपछि पहिलेको तुलनामा काठमाडौंका सडक थोरैमात्र अवरोध हुने गर्थे । भएपनि यसरी राजनितिक कारणले सडक भरिएका थिएनन् । भरिएका थिए त केवल जनताको आम समस्याले जसलाई न त सरकारले सुन्यो न त सम्बोधन नै भयो। आश्वासन मात्र दिएर साम्य पारियो । उखु किसानका समस्या हुन वा निर्मला पन्तको विभत्स हत्या । कुनै पनि समस्याले निकास पाएन । किनकी त्यो त जनताको समस्या थियो त्यसैले राजनितिका कार्यकर्ता सडकमा आएनन् र सडक तातेन । समस्या समाधान हुने कुरै भएन ।
ल छोडौं यी कुरा । अहिलेकै जल्दोबल्दो समस्याको कुरा गरौ । विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको छ कोभिड १९ माहामारी । नेपाल पनि अछुतो रहने कुरै भएन । नेपालमा हालसम्म २ लाख ६० हजार बढी मानिस कोरोना भाइरस( कोभिड १९) बाट संक्रमित भएका छन् भने १८ सय बढीको ज्यान गइसकेको छ । पछिल्लो समय दैनिक ७ सयको हाराहारीमा कोरोना संक्रमित हरु थपिएका छन् । गत चैतदेखि भित्रिएको कोराना भाइरसको सकं्रमणपछि सरकारले पुरै देश लकडाउन गर्यो । करिब ५ महिनाको लकडाउन पछि आंशिक हुँदै अहिले मनोरन्जन क्षेत्रबाहेक सबै क्षेत्र खोल्न सरकारले अनुमति दिएको छ ।( फिल्महलहरु पनि हलमालिकहरुले एकतर्फी रुपमा खोलिसकेका छन्) ।
करिब ५ महिनासम्म जनतालाई थुनेर राखेर कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न खोजेको नेपालले अन्ततः लकडाउन खोल्यो । कुनै अध्ययन अनुसन्धान नै नगरि सुरुवाती दिनमा लकडाउन गरेको र अहिले हजारौंको संख्यामा फैलदा केही नगरेको भनी सरकारको आलोचना भइरहेको छ । तर त्यो आलोचना फेरि लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नभई कुनै भिजन बिना नै चैत देखि गरिएको लकडाउनको विषयमा हो । हजारौं मजदुरलाई अलपत्र परेर दुख बेसाउन बाध्य भएका थिए । तर अहिले के छ ? कोरोना कहर घटेको छैन ।अहिले परीक्षण घटेको छ त्यसैले दैनिक संक्रमितको संख्या घटेका हुन् कोरोना माहामारी घटेको होइन भनेर स्वास्थ्य क्षेत्र कै विज्ञहरुले भनिरहेको छन् । सरकारले भीडभाड नगर्न माक्स लगाउन र स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर व्यापार व्यवसाय खोल्न आग्रह गरेको छ ।
तर पछिल्लो राजनितिक घटनाक्रमले सिंगो देशकै सडक तातेको छ । चोकदेखि गल्ली गल्ली संसद् विघटनको पक्ष र विपक्षमा चर्चा परिचर्चा छ । यसै सन्दर्भमा नेकपा पार्टी नै फुटेको (अनौचापारिक) अवस्था छ । एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्का बरिष्ठ नेता( हाल नेकपा अध्यक्ष) माधवकुमार नेपाल समुहले देशभर प्रदर्शन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंबैधानिक भन्दै संसद् पुनस्थापनाको माग दाहाल नेपाल समूहको छ । उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि सोमबार देशैभर प्रदर्शन गर्यो । प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्षमा पनि देशभर प्रदर्शन भइरहेको छ ।
यसरी सडकमा ठुलो भेलासम्मेलन भइरहँदा सरकार र प्रसाशन भने मौन छ । अन्य समयमा भीडभाड नगर्न आग्रह गर्ने स्थानीय सरकार र संघीय सरकार यतिबेला मौन छ । तर सरकार मौन बस्दैमा कोरोना पनि मौन बस्छ भन्ने त हुँदैन । कोरोना भाइरसले अहिले नेपालमा राजनितिक संकट छ अलि पछि आउँछु वा छुट दिन्छ त भन्दैन होला । त्यसैले एक पटक सोचौ त के हामीभित्र कोरोना त सरेको छैन । आन्दोलनमा सहभागीहरुले के स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएका छन् त ? सामाजिक दुरी कायम छ त ?
अब मंगलबार नेकपाको विशाल जनसभालाई सम्बोधन गर्न गएका नेताहरुले अपनाएको स्वास्थ्य मापदण्डबारे कुरा गरौं । मंगलबार भृकुटिमण्डपमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्न गएका नेताहरुले माक्स लगाएका छन्। सानो स्टेजमा एक ठाउँ बसेका उनीहरुले सामाजिक दुरी कायम राख्ने कुरो त भएन । तर माक्स भने सबैले लगाएका छन् । प्रचण्ड स्टेजमा पुग्दा अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भित्रि खल्तीबाट निकालेर स्यानिटाइजर दल्दै थिए । प्रचण्ड पुगेको केही क्षणमा पानी मागेर खाए । त्यसपछि यताउति हेर्दैै माधवसँग स्यानिटाइजर मागे । अलिकति निकालेर र बोतल फिर्ता दिएर आफ्नो हातमा दल्न थाले । माधवले उसै गरी स्यानिटाइजर भित्रि खल्तीमा राखे । हेर्दा लाग्छ प्रचण्डले स्यानिटाइजर बोकेका छैनन् वा आज बोक्न बिर्सिए । तर उनी आफ्नो स्वस्थ्यबारे सजग भने छन् । तर हजारौंको संख्यामा आएका सहभागीले को सँग मागेर स्यानिटाइजर दल्ने ?
सडकमा चिच्याई चिच्याई हिडेका सहभागीले चाहेका बेला पानी समेत खान पाउँदैनन् स्यानिटाइजर दल्न पाउने त कुरै छैन। हो प्रधानमन्त्रीबाट असंबैधानिक कदम चालिएको छ त्यसको विरोध त गर्नुपर्छ सँगसँगै आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नेकि ?
रिषीकेश न्यौपाने १० दिन अगाडी